သားအိမ် cyst - အမျိုးသမီးရောဂါလက္ခဏာများ။ Follicular, endometrial, သားအိမ် dermoid cyst - ကုသမှု
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းမရှိဘဲနှင့်ခွဲစိတ်မှုနှင့်အတူကင်ဆာအမျိုးအစားအားလုံးကိုဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လို - သားအိမ် cyst?
မီးယပ်ရောဂါများအနက်သားအိမ် cyst သီးခြားအနေအထားယူထားသော။ ဒီရောဂါမကြာခဏကြိုတင်ကာကွယ်စာမေးပွဲကာလအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တစ်ဦးက hidden ကျမ်းပိုဒ်ကသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းရေးကြီးမားသည်လာသောအခါပထမဦးဆုံးလက္ခဏာတွေအများစုကိစ္စများတွင်ပေါ်လာပါသည်။
သားအိမ် cyst - အမြင်များ
entity တစ်ခုအရည်အတွင်း၌အတူလိုင်ရှိခြင်းကိုခေါ် cyst ။ သားအိမ် cyst gonadal အမျိုးသမီးတွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့သော protrusion ၏တူညီသောမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပါးလွှာ, stretchable မြို့ရိုးကိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် volume ထဲမှာတိုးမြှင့်, လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဆရာဝန်များ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ, ပညာရေးအချင်း 15-20 စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားညင်သာပျော့ပျောင်းကြီးထွားလာခြင်းသည်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အဦများရှိသည်။ ဤအဆိုအရကြောင့် cyst အတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့ကောင်းတဲ့င်:
အဆိုပါ Ovary ၏ parovarian cyst;
cyst Corpus luteum;
Ovary ၏ Follicular cyst
Follicular cyst အသုံးအများဆုံးပုံစံတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ဒါဟာ functional ဖြစ်စေ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရည်ညွှန်း - နီးပါးမည်သည့်မိန်းကလေးတစ်ဦးအတွက်ရာသီစက်ဝန်းအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကျိုးပဲ့မရမသေချာမရေရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်အခါ follicles ဖြစ်ပေါ်လျက်, ကြက်ဥအထဲကလာမယ့်မပေးပါ။ ဤရွေ့ကားဖွဲ့စည်းမှုခဲကြီးမားသောအရွယ်အစားကိုရောက်ရှိ, ပါးလွှာ-တံတိုင်းကာရံထားသောဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင် follicular cyst 2-3 သံသရာအဘို့, လွတ်လပ်စွာဖျက်သိမ်း။
တစ်ဦးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သောတစ်ဦး Corpus luteum cyst ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ယန္တရားတွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်။ အရည်ဖွဲ့စည်းထားသော Corpus luteum အတွင်းစုဆောင်းတဲ့အခါမှာဒါဟာအောင်မြင်တဲ့မျိုးဥထွက်ပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိုသို့သောတစ်ခုသားအိမ် cyst - မကြာခဏဖြစ်ရပ်ဆန်း။ follicular မတူဘဲ, Corpus luteum cyst ထူသောမြို့ရိုးရှိပါတယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဖွံ့ဖြိုးရေးတစ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းမရှိ, နှင့် cyst မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့် 3-4 ရာသီသံသရာအတွင်း။
Endometrioid သားအိမ် cyst
Endometrial cyst အထက်တွင်ဆွေးနွေးအမျိုးအစားများထက်ပုံစံဖွဲ့စည်းပုံပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် gonads endometrial ဆဲလ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာက၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းလိုင်၏ရလဒ်ဖွဲ့စည်းသည်နှင့်အမျှမကြာခဏစတင်ခဲ့သည်သောရာသီ, အသွေးစဉ်အတွင်း dissipated စုဆောင်း။ ဒီရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့အောက်ပိုင်းဝမ်းဗိုက်တွင်နာကျင်မှု fixed, ဒါကြောင့်အချိန်မီထုံးစံ၌အများဆုံးဖြစ်ပွားမှု၌ဤရောဂါဗေဒ၏ရောဂါနေကြသည်။ ဒီအမျိုးအစား cyst ကောက်ကာငင်ကာ rupture လိမ့်မည်။
Dermoid သားအိမ် cyst
မြင်းသရိုက်အနာ၏ညင်သာပျော့ပျောင်းသဘောသဘာဝ၏ဤအမျိုးအစားမျိုးပွားအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများပိုမိုဘုံဖြစ်ကြသည်။ Dermoid cyst လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အချင်း 15 စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အဦများ၏တစ်ဦးကအင်္ဂါရပ်သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးနု, ဆံပင်, ဆက်, adipose: မကြာခဏ၎င်း၏လိုင်အတွက် cyst ၏ဖွင့်ပွဲမှာတစ်ရှူး၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ultrasound အချက်အလက်များ၏ဖွဲ့စည်းရေးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ screen ပေါ်မှာပြသနေသည်စဉ်အတွင်း။ အသေးစိတ်အဖြေရှာတဲ့သမားများအတွက်မကြာခဏမှန် CT, MRI ကိုအသုံးပြုပါ။ cyst အမျိုးအစားအားလုံးကိုများထဲတွင်, ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 20% ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သားအိမ် cyst - ထိုအကြောင်းတရားများ
မကြာခဏဆိုသလိုဆရာဝန်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့သားအိမ် cyst ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အရာကို, အတိအကျရှာရန်မဟုတ်နိုင် - ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းမကြာခဏ multifactorial ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အများဆုံးရောဂါအထူးကုကင်ဆာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ခလုတ်မျိုးပွားစနစ်၏တစ်ဦးဟော်မုန်းပျက်ကွက်သို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းကြောင်း concurs ။ စာရင်းများအရ cystic ရောဂါများအားလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 70% သည်အသက် childbearing အမျိုးသမီးများအတွက် fixed ဖြစ်ပါတယ်။ : ဤအင်္ဂါရပ်ပေးသငျသညျသားအိမ် cyst ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှုံ့ဆော်ရှေ့မှောက်တွင်အရာ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများ, ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
အစောပိုင်းမီးယပ်စချိန် (13 နှစ်မှပထမဦးဆုံးလ);
သားအိမ် cyst - အမျိုးသမီးရောဂါလက္ခဏာများ
သားအိမ် cyst ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အခါရောဂါလက္ခဏာတွေချက်ချင်းပေါ်လာပါဘူး။ ထို့ကြောင့် follicular cyst, Corpus luteum cyst သူ့ဟာသူတငျပွမရှိဘဲသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်သည်, ပြီးတော့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွား။ သားအိမ် cyst ကိုကျယ်ဝန်းစေနှင့်ထွင်ထားတဲအတွက်အနီးအနားမှာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပေါ်နှိပ်ဖို့အစပြုလာသောအခါအများဆုံးကိစ္စများတွင်အမျိုးသမီးများသည်ရောဂါအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်မှာလူနာကအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုသတိပြုမိ:
လက်ျာ Ovary ၏ cyst
functional သားအိမ် cyst, ညာဖက်အပေါ်ပိုမိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက် - ထိုတင်ပါးဆုံတွင်းဧရိယာများ၏အကောင်းဆုံးအသှေးကိုပေးဝေ။ မြင်းသရိုက်အနာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ယန္တရားသည်ဆရာဝန်များကအဆိုပါ appendectomy (နောကျဆကျတှဲဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွဲစိတ်ကုသမှု) ကတည်းက cyst ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုကဆိုသည်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့အားဆင်တူသည်။ တစ်ဦးကလက္ခဏာအင်္ဂါရပ်တစ်ခါတစ်ရံပေါင်မှတိုးချဲ့သောဝမ်းဗိုက်၏ညာဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့နာကျင်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
Left သားအိမ် cyst
ယင်းတင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများ၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂလင်း၏ပျက်စီးမှုလြှငျ, သားအိမ် cyst လက္ခဏာတွေအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သူတို့အားဆင်တူသည်။ လက်ဝဲ Ovary ပိုပြီးမကြာခဏထိခိုက်နစ်နာတဲ့ colitis (အူရောင်ခြင်း) ခံစားနေရပြီး၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ လိင်ဂလင်း၏နီးကပ်နှင့်အူသည်ဤခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံအကြား histologic ဆက်ဆံရေးမျိုး၏ရှေ့မှောက်တွင်အတည်ပြု။ ရောဂါဗေဒ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များအထက်တွင်ဆှေးနှေးခဲ့သူတွေကိုကှာခွားပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဘယ်ဖက်အပေါ်အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။
သားအိမ် cyst - ကုသမှု
သငျသညျသားအိမ် cyst ပြုမူဆက်ဆံမီ, ဆရာဝန်များတစ်ဦး differential ကိုရောဂါလုပ်ဆောင်။ စစ်တမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်ရောဂါ၏အကြောင်းရင်း, ဒါပေမယ့်လည်းပညာရေး၏အမျိုးအစားပြဌာန်းခွင့်၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်နေရာအတိအကျကိုမြဲမြံစေခြင်းငှါမသာဖြစ်ပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များကတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ထားကုထုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနည်းဗျူဟာရွေးချ။ တစ်ဦး functional သဘောသဘာဝဖွဲ့စည်းခြင်း (follicular cyst, ဘယ်အချိန်မှာ Corpus luteum cyst ) ဆေးသမားစောင့်စောင့်ဆိုင်းလိုက်နာ။
ဤအမှုကိစ္စများတွင်ကုသမှုကန့်သတ် cyst ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေးဝါး, ဗီတာမင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားမှာရှုပ်ထွေးသင်တန်းသာကုသမှုခွဲစိတ်ဖြစ်ပါတယ် cysts ။ အသုံးပြုတဲ့ရှုပ်ထွေးကုသမှုထဲမှာနောက်ထပ်နည်းလမ်းအဖြစ်:
ခွဲစိတ်စရာမလိုဘဲသားအိမ် cyst ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါဆရာဝန်ကဘယ်လိုနဲ့ဘာအမှု၌အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အ Ovary အပေါ်တစ်ဦး cyst ဆက်ဆံဖို့ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ. တစ်ဦးချင်းစီကိုကုသ algorithm ကိုလုပ်ရမည်။ ကိစ္စအများစုတွင်, Ovary အပေါ်တစ်ဦး cyst ဟော်မုန်းလိုအပ်သည်။ မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းပြီးနောက်ပြောင်းပြန် cyst ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအောင်မြင်ရန်, ပညာရေး၏တိုးတက်မှုရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကုသမှု and Multiples ၏ဆေးထိုး, ကြာချိန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုရှေးခယျြနေကြသည်။ : ပါးစပ် contraceptives - ထိုအသုံးများသောဟော်မုန်းနည်းလမ်းများအနက်
အပြိုင်အတွက်ထွင်ထားတဲအတွက်ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကိုလိုက်ပါ cyst, Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးသုံးပြီး အကယ်. :
သားအိမ် cyst ကဲ့သို့သောရောဂါများတွင်ကုသမှုရိုးရာကုစားကုထုံးတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဖြည့်မူလတန်းသင်ရိုးရှိနိုင်ပါသည်။
တောင်ပေါ်သားအိမ် - အပိုဒ်5။ ဇွန်း,
မှောင်မိုက်အရပ်၌2ပတ်အပြင်းအထန်တောင်းဆို။
အစားအသောက်မတိုင်မီ 1 နာရီများအတွက်ပြုတ်ရည်၏5ပေါက်3ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ယူပါ။
သားအိမ် cyst - စစ်ဆင်ရေး
ပြဿနာများဆရာဝန်များ၏မရှိခြင်းအတွက်ရောဂါပြီးနောက် pharmacological နည်းလမ်းများနှင့်အတူကုသမှုကိုစတင်။ ကုသမှု3လအတွင်း, ထိုတိုးတက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိမဟုတ်လျှင်, cyst ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ခွဲစိတ်ကုသမှုမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အနိမ့်-သက်ရောက်မှုစစ်ဆင်ရေး access ကိုသေးငယ်တဲ့ခွဲစိတ်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်သော - သားအိမ် cyst ၏ဖယ်ရှားရေး laparoscopy အားဖြင့်အထဲကယူသွားတတ်၏။ Laparoscopy သားအိမ် cyst အပြည့်အဝကိုဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. ထိန်းချုပ်နေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းခြင်း, ရောဂါဗေဒဇာတ်စင်လုပ်ငန်းစဉ်၏အမျိုးအစား, စစ်ဆင်ရေး၏အောက်ပါအမျိုးအစားများပေါ် မူတည်. :
Cystectomy - ကျန်းမာဆီးကျိတ်တစ်ရှူးထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်, သာ cystic ဖွဲ့စည်းရေးမဖယ်ရှားပါဝငျသညျ။
သပ်ဆိုင်ရာပါရဂူကျမ်းပြုစု - ထို cyst ၏ယစ်မျိုးနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရှူး။
Oophorectomy - ထို Ovary ၏ပြီးပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေး။ ozlakachestvlenii အကျိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သားအိမ် cyst - အကျိုးဆက်များ
ရောဂါ၏ခြိမ်းခြောက်ရှုပ်ထွေးသားအိမ် cyst ကွာဟချက်ပါပဲ။ ဒါကစူးရှလက်တွေ့ရုပ်ပုံလွှာတစ်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ရှာဖွေရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ cyst ကှဲထှကျလက္ခဏာတွေများထဲတွင်:
အခြေအနေကအရေးပေါ်ခွဲစိတ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သည်။ သာဝမ်းဗိုက်သန့်စင်နှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးမှာပျက်စီးသွားသောတစ်ရှူးကင်ဆာသို့မဟုတ် Ovary ။ ကုထုံး၏မရှိခြင်းအတွက်သားအိမ် cyst ကနေဖြစ်ပေါ်စေမည်အခြားအကျိုးဆက်များများထဲတွင်:
စောင် - မာစတာအတန်းအစား
အိမ်မှာစပျစ်သီးပျဉ်အနေဖြင့်စပျစ်ရည်ကို - စာရွက်
မျှော်လင့်ခြင်း Ball ကို-2016 ၏ Carousel မှာရှာရုန်ကျောက်ခေတ်, ဂျိန်း Fonda နှင့်အခြားကြယ်များ
Caviar အတူ pancakes ခြုံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စက်မှုစတိုင် - ကိုအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များနှင့်အခြေခံဒီဇိုင်းနည်းစနစ်
Command 'ထိုင်' ရန်သင့်ခွေးကိုသင်ပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဟောင်းများချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Gwyneth Paltrow မင်းသမီးများ၏ကလေးမွေးဖွားတဲ့နေ့ကရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်
ရုက္ခဗေဒဥယျာဥ် Wolf က Feed
Heath Ledger ၏အသေခံကတည်းက 10 နှစ်: ဟောင်းမိန်းကလေးနှမ, Naomi Watts နဲ့ကွယ်လွန်သူသရုပ်ဆောင်သတိရ